Andravoahangy : diovina ny CSB II | NewsMada
Andravoahangy : diovina ny CSB II
Toeram-pitsaboana anisan’ny be mpandeha ny CSB II etsy Andravoahangy. Tonga mitsabo tena ao avokoa na ny monina eny Manjakandray, na Behoririka, na Ambodivona na ny manodidina rehetra. Saika ireo fianakaviana sahirana mipetraka amin’ireo fokontany manodidina ihany koa no tena manatona ao amin’ity CSB II ity, raha ny fanazavana. Hivezivezen’ny olona maro, araka izany, ny fotodrafitrasa ka mora vasoka.
Anton’ny fanavaozana ifarimbonan’ny CUA sy ireo ray aman-drenin’ny mpianatra vitsivitsy ao an-toerana indrindra izany.
Nifanome tanana amin’ny fanatontosana ny asa fanadiovana ny CSB II Andravoahangy ho tombontsoa ambonin’ireo ankizy tsaboina sy tezaina ao ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny asa sosialy eto anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ireo ray aman-drenin’ny mpianatra miisa folo eo ho eo.
Haharitra roa andro ny fanamboarana ary anisany hatao amin’izany ny fandokoana ny tambohon’ny sekoly sy ny efitrano fianarana. An-taony maro tsy nisy fikarakarana izao toerana izao. Toerana izay natokana ho an’ny ankizy « préscolaire » sy « garderie » ka sahanin’ny kaominina.
Iantohan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin’ny fanamboarana, toy ny loko sy ny kojakoja hafa.